Iinkqubo, Iimvume kunye noGunyaziso | Martech Zone
Iinkqubo, iimvume kunye nokugunyazwa
NgoMvulo, Matshi 16, 2009 NgoLwesibini, Oktobha 4, 2011 Douglas Karr
Ndifunda iphephancwadi loyilo lweWebhu (iphephancwadi eliqaqambileyo!) Kwaye kwicandelo eliviwayo ibingu:
Inkampani yeenkqubo ivelisa ikhowudi. Inkampani yabaphathi ivelisa iintlanganiso. Ukufuna ukusuka kuGreg Knauss, uMdwelisi weNkqubo.
Indenze ndacinga ngeziqalo. Njengokuqala kwesiqalo, ndicinga ukuba kukho iindidi zabasebenzi abeza ebhodini:
Kuqala kuza abenzi. Bayazenza izinto, nokuba zithini.
Emva koko kuza iinkokeli. Banceda ukukhokela abenzi kwaye bancede ukutyhala inkampani kwicala elifanelekileyo.
Emva koko kuza abaphathi. Bafaka iinkqubo, iimvume kunye nokugunyaziswa.
Inyathelo 3 linyathelo eliphazamisayo. Iinjongo zeenkqubo, iimvume kunye nokugunyaziswa kukuqinisekisa umgangatho kunye nokhuseleko. Nangona kunjalo, xa iphazamisa ubuchule kunye nenkqubo yenkampani ekhulayo, iya kuyingcwaba. Ndikubonile oku qalo ngalunye endikhe ndasebenza kulo.
Ukubonelela ngencwadi yokufaka imibala kunye neekhrayoni kwi umculi kwaye ubaxelele ukuba bahlale emigceni yindlela eqinisekileyo yomlilo yokuqinisekisa ukuba awuyi kufumana iqhekeza lobugcisa elingenakuthelekiswa nanto.
tags: iakhawunti ekhuthaziweyo ye-twitterzigqibonkomfa yevidiyo
Imiboniso: Indlela elula yokubulala iNtlanganiso
Tsiba iResume kunye neJob Fair
Mar 16, 2009 ngo 3:31 PM
Owona msebenzi uphambili wolawulo asikokulawula kodwa kukunika amandla. Xa imibutho iqala ukugxila ekunciphiseni into enokwenziwa ngabantu kunokuba bamkele amandla abantu okudala, uqala ukuba neengxaki ezinkulu.
Ngelishwa, abaphathi abaninzi babambekile kwingqondo yokuba abaphathi bafuna ukumisela indlela omnye umntu ekufuneka asebenze ngayo. Enyanisweni, abaphathi abakhulu ngabantu abenzayo susa imiqobo yendlela ukusebenza ukuze abantu abakrelekrele embuthweni babe nesakhono sokusebenzisa ubuchule babo endaweni yokulwa nenkqubo.
Sigubungele okwenzekayo kubasebenzi abaphantsi kolawulo olucinezelayo kwinyanga ephelileyo kushicilelo lwethu lweSuperbowl Ad Indlela yeBlog. Bona ibali elipheleleyo ku:
Mar 16, 2009 ngo 7:23 PM
Amen, Robby! Abaphathi abaninzi bakholelwa ukuba ngumsebenzi wabo 'ukuphucula' abasebenzi kunokuba 'benze' abasebenzi. Bendisoloko ndinabantu abandibizayo 'njengomphathi olula', kodwa bendisoloko ndigqithisa nakuphi na obekulindelwe xa ndinikwa ithuba.